uthenge i-CDP powder powder (987-78-0) hplc =98% | AASraw abaphakeli
/ iimveliso / I-Nootropics powder / I-CDP ye-powder powder
SKU: 987-78-0. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-CDP ye-powline ye-choline (i-987-78-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Ividiyo ye-CDP ye-powline powder
I-CDP ye-powder ye-powder Isiseko sabantu
igama: I-CDP ye-powder powder
I-molecular Formula: C14H26N4O11P2
Isisindo somzimba: 488.32
I-CDP i-powline ye-powder ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kunye nokunyusa okongezelelweyo
Amagama: I-CDP i-choline powder, i-citicholine, i-Neurocoline
Ukusetyenziswa kwePowder ye-CDP
Oku kuncedwa kukuthintela okanye kunyanga ukukhubazeka kweememori ezinxulumene nokuguga ngenxa yokuba zombini iamolekyu leyo inika i-neuroprotective kwaye inokuphucula ukufunda. Nangona kubonakala kusebenza ngakumbi kune-phosphatidylcholine (i-PC) kule nxaxheba, inxenye ngenxa yokunyuka kwePC kwindlela yengqondo, ubuchule bayo bufana noko ku-Alpha-GPC.
I-CDP-choline inezinye izinto ezisetyenziswayo malunga nokuqonda. Ngokuqhelekileyo sisetyenziselwa ukukhumbuza inkumbulo ebusheni, kodwa nangona uphando lweentonga ezibonisa ukuba oku kunokwenzeka ngomlomo we-CDP-choline, akukho zifundo zabantu ebusheni kweli xesha. Olunye uphando lubone ukwanda kwenkcazo ye-CDP-choline ephantsi (okufuneka iphendulwe), kwaye i-CDP-choline ingaba neendima njenge-anti-addictive compound ngokumelene ne-cocaine kwaye (ubungqina bokuqala bubonisa) ukutya kanye.
Ngenxa yokuba i-CDP ye-choline ixhomekeke kakuhle, uluhlu oluninzi lwee-doses luye lwabhalwa ngaphandle kokubonakala kwemiphumo ebalulekileyo. Umlinganiselo wemihla ngemihla ye-250 ukuya kwi-1000 mg, nokuba kwimizi enye okanye kwiiyithingi ezimbini ze-8 kwiiyure ze-12, ngokuqhelekileyo zibhekwa njengezikhuselekileyo kwaye zisebenza.
Okuthakazelisayo, ukufundwa kwe-MIT kubonisa ukuba imiphumo ye-4000 mg ayizange ihluke ngokuthelekisekileyo neye-dose ye-2000 mg, ibonakala ibonisa ukuba akukho xabiso elincinane ekuthathweni kwamanani aphezulu kakhulu.
I-CDP ye-choline ifumaneka kwiphepha le-capsule kunye nefowder. Ingqungquthela yamanzi, kunye ne-95% yomthamo womlomo ixhaswa ngumzimba.
Isilumkiso kwi-CDP ye-powder powder
Izilingo kunye nezifundo zonyango zibonisa ukuba i-CDP ye-choline ayinayo imiphumo emibi ekhompyutheni, nakwizinga eliphezulu. Iimvavanyo ezinobungozi ziye zabonisa ukuba akukho miphumo embi kwi-system cholinergic kwaye iyakunyamezela ngokupheleleyo, iimpawu ezenza ukuba zilungele unyango lwezifo ezahlukeneyo, izigulana kunye neengxaki.
Ukuzithemba, intloko, ukulala, kunye nesifo sohudo kuye kwabikwa ngokubhekiselele kwimiphumo emibi. Akukho zifundo malunga nomthelela kwabasetyhini abakhulelweyo sele begqityiwe, ngoko ke abo abakhulelweyo okanye abancelisayo bayacetyiswa ukuba bayeke ukusebenzisa i-CPD choline.
I-CDP ye-choline yongezelela kakhulu kwi-regimen yomsebenzisi we-nootropic. Ngokwakho, i-memory enhancer enhancer, eyaziwayo ukuphucula ukukhumbula nokukhusela ukulahleka kwememori ephathelene nokuguga, ukugula kunye nokulimala.
Inikeza amandla angakumbi engqondo, ukugxila ngakumbi, kunye nengcamango ecacileyo. Ukudibanisa namanye ama-nootropics ngumntu onamandla onokuthi, kwaye xa ukuxutywa kunye neercetam ngokukodwa kubangela imiphumo yokusebenzisana ethatha ukuphuculwa kwengqondo kwinqanaba elingenako ukufikelela ngaphandle kwesinye.
Ukuvavanywa ngekliniki nokufundiswa amashumi eminyaka, i-CDP choline iboniswe ukuba ibekezeleleke kakhulu nakwizinga eliphezulu, nakuba ixabiso eliphezulu alikho imfuneko yokufikelela kwiziphumo ezifanelekileyo. Akukho ziphumo ezibi kakhulu ezicatshulwayo kwaye zivunyiwe ukuba zonyango kwiYurophu naseJapan.
I-CDP ye-choline yinto efikelelekayo, eyongezelelekayo efumanekayo enokuqinileyo kwaye ikhula ngokulandelayo phakathi kwabasebenzisi be-nootropic. Ukuba ufuna ukufumana ubuninzi kwiisitaki zakho ze-nootropic, i-CDP choline ngumthombo we-choline ofanele ukuzama.
(1) Ingaba i-CDP i-choline powder isebenza?
I-CDP yeConline i-hydrolizedise kwi-Choline kunye ne-cytidine emathunjini, emva kokuwela i-Blood-Brain Barrier itshintshwe kwakhona kwiCDP yeColine apho isetyenziswe khona kwaye ixutywe kwi-Acetylcholine receptors echaphazelekayo ekucingweni nasekubunjweni kwememori. Inzuzo ekhuselekileyo ye-neuro eyenziwa yi-CDP Choline ingabangelwa kukugcinwa kweCardiolipin kunye neSphingomyelin. Enye iphakanyiswe indlela yokwenza isenzo sokuvuselela i-glutathione synthesis. I-CDP yeConline inceda ekuphuculeni ukubonakaliswa kweemvume ezininzi ezifana ne-acetylcholine, norepinephrin, kunye ne-dopamine.
Kukho iinguqu ezininzi nangona kunjalo kufuneka zijongwe kunye nokuphucula amandla okuqonda. Ngenxa yoko, kunzima ukufumanisa ukuba i-CDP yeConline iphumelele njani kumntu othile. Konke kuya kwiimfuno zabo kunye nekhono lokuqonda ngoku kunye nendlela yokuphila.
(2) IZINCEDO NEMIPHUMO
I-CDP ye-choline yinkxaso enamandla ye-nootropic eyenza ezinye iindawo ze-nootropics kwaye zisebenze ngokwabo ukuphucula iinkalo ezininzi zokuqonda kunye nempilo yengqondo:
Ukuphucula imemori: I-CDP yeConline mhlawumbi iyaziwa ngokukwazi kwayo ukuphucula imemori nokukhusela ukulahleka kwememori. Ngokuqhelekileyo kudibana nokulwa nokuguga kwaye kuye kwafundwa njengokwenza unyango lwe-Alzheimer's disease.
• Ukwandisa Amandla Eengqondo: Ukugcina umlinganiselo wamandla engqondo kubalulekile kuwo wonke umntu, ukusuka kubafundi abajongene novavanyo kubantu abadala abakhathazeka ngokuphazamiseka kwengqondo ngokukhawuleza kuhambelana nokuguga. Uvavanyo lwezonyango luye lwabonisa ukuba i-CDP yeConline inempembelelo ebalulekileyo kwimandla engqondo, ikhuphula i-lobe bioenergetics yangaphambili kunye nokunciphisa ukunciphisa ukuqonda okunxulumene nokuguga.
• Ukujolisa ngakumbi nokugxininisa: i-CDP choline inokunyusa amandla okugxininisa ixesha elide kunye nokuphazamiseka okuncinci, kubalulekile ekufundeni, ukuqonda ubuchule obutsha, okanye ukugqiba nayiphi na imisebenzi enzima kunye nengqondo. Izifundo zibonisa ukuba oku kunjalo nakwiimeko ezinzulu kuquka ukubetha, ukulimala kwengqondo, kunye nesifo se-Alzheimer.
• Ukunika amandla nokuphucula ezinye iiNootropics: Abasebenzisi abaninzi be-nootropic bajonga i-CDP ye-choline ifanele ukuba nayo xa kwakhiwa nayiphi na intonga okanye ukuhlanganiswa kwezibonelelo. Umthombo ogqwesileyo we-choline, usebenza ngokukodwa kwi-nocotam yeklasi ye-nootropics, okwenza imiphumo yabo ibe namandla kwaye ngexesha elifanayo ukukhusela intloko emancinci edlalwa ngamanqetam. Kuye kwaboniswa ukulibazisa ukuqala kokuphazamiseka kwengqondo kwisifo se-Alzheimer xa sisetyenziselwa ukudibanisa ne-piracetam.
I-CDP i-Choline Raw Powder
I-CDP i-Choline Raw Powder Recipes
I-CDP ye-powder yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-CDP ye-powder powline esuka kwi-AASraw
I-CDP ye-Choline Powder: Iingcebiso kunye neziNcedo kunye neempembelelo ezisecaleni-I-Nootropics echanekileyo